Nhau - Kuchengetedza uye kugadzirisa kwefaera michina
Kuchengetedza nekuchengetedza mashandisirwo emidziyo yefaera: Usati washandisa firita isina simbi, unofanira kutarisa kuti zvishongedzo nekuisa zvindori kwakakwana here uye kuti zvakakanganisika here wozozviisa sezvinodiwa.
Sefa nyowani inofanirwa kucheneswa nesipo (ndapota usashandise acid yekuchenesa). Mushure mekugeza, shandisa yakasimba-tembiricha hwemvura kuti ishaise, kuuraya utachiona, uye kuchenesa firita kuti usasvibiswe.
Paunenge uchiisa iyo firita, usabatanidze iyo yekupinda uye nzira yekubuda zvakare. Chiteshi parutivi rweplate repasi peye firita ndiyo inlet yemvura, uye pombi yakabatana nefaera element socket ndiyo yakachena mvura nzira.
Chinhu chitsva ndechekuti mugadziri haafanire kubvarura mapurasitiki kana akaiswa muhomwe yepurasitiki mune yakachena michina yekugadzira. Shandisa chimwe chinodzvinyirira firita chinhu uye pfuura nepamusoro tembiricha sterilization mushure mekuisirwa.
Paunenge uchiisa iyo firita chinhu mukuvhura, iyo firita chinhu chinofanira kuve chakamira. Mushure mekuisa kuvhura, ndiro yekumanikidza inokwenya mapini emapipi, uyezve sunga iyo screws uye usatama. Mushure memusuwo weiyo sefa chinhu cheiyo 226 interface, inofanirwa kutenderedzwa 90 madhigirii uye yakadzvanywa. Iyi ndiyo kiyi yekumisikidza. Kana iwe ukasangwarira, chisimbiso hachizadzikiswe, uye kuvuza kwemvura kunenge kuri nyore, uye zvinoshandiswa pakushandisa hazvizadzikiswe.
Ikoji yekumanikidza yesilinda chiratidzo chemvura yekumanikidza. Kana iri yechipiri firita, zvakajairika kuti iyo index yeiyo yekutanga firita yekumanikidza geji iri zvishoma zvishoma. Iyo yakareba iyo nguva yekushandisa, kumanikidza kuchawedzera uye kuyerera kwehuwandu kunodzikira, zvinoreva kuti mazhinji eefirita element mabara anga ari Kana akavharirwa, pukuta kana kutsiva nechinhu chitsva chesefa.
Kana uchisefa, iko kumanikidza kunoshandiswa kazhinji nezve 0.1MPa, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekugadzira. Nekuwedzera kwenguva uye kuyerera, iwo ma micropores echinhu chesefa achadzivirirwa uye kumanikidza kuchawedzera. Kazhinji, haifanirwe kudarika 0.4MPa. Iyo yakanyanya kukosha haitenderwi. Kupfuura 0.6MPa. Zvikasadaro zvinokanganisa iyo firita chinhu kana kubayiwa. Kunyanya kutarisirwa kunofanira kutorwa kana uchishandisa chaiyo mafirita.
Kana kugadzirwa kwapera, edza kuburitsa iyo filtrate zvakanyanya sezvinobvira. Nguva yekuzorora haina kureba. Kazhinji, usavhure muchina, usaburitse chinhu chesefa, kana chengeta iyo filtrate nehusiku. Iyo firita chinhu uye firita inofanira kucheneswa kana muchina ukamiswa (nzira yekudzosa inogona kushandiswa zvakare).
Inesarudzo yekufananidza kushandiswa, teerera kune inodikanwa kuyerera, kumanikidza, pombi musoro kuenderana, iyo sarudzo inowanzo kuve yakakodzera kune vortex pombi, infusion pombi, nezvimwewo, centrifugal pombi haishande.
Maintenance nzira yekusefa michina
Kana iyo firita ikasashandiswa kwenguva yakareba, firita inofanirwa kucheneswa, chinhu chesefa chinofanira kubviswa, kugezwa nekuomeswa, chisimbiswe nehombodo yepurasitiki kuitira kuti isasvibiswe, uye firita inofanira kupukutwa nekuchengetwa pasina kukuvara.
Iyo yakatsiviwa firita chinhu inofanirwa kunyoroveswa muacid-base lotion kweasina kupfuura maawa makumi maviri nemana. Iyo tembiricha yeacid-base solution inowanzo kuve 25 ℃ -50 ℃. Zvinokurudzirwa kuti huwandu hweacid kana alkali kumvura iri 10-20%. Iyo filtrate uye sefa chinhu ine yakakwira mapuroteni zvemukati zviri nani kunyudzwa mune enzyme mhinduro, uye yekuchenesa mhedzisiro yakanaka. Kana ikavandudzwa, inofanirwa kucheneswa uye yozoiswa mweya. Kuchenesa uye disinfection kwakakosha kwazvo kune mafirita emvura uye mafirita dryer.
Kana uchichenesa iyo firita chinhu, teerera iyo nguva uye tembiricha. Izvo zvakakodzera kushandisa 121 ℃ ye polypropylene mune yakanyanya-tembiricha disinfection kabhineti, uye shandisa chiutsi chekuita mbichana pane yekumanikidza kumanikidza kwe0.0MPa uye 130 ℃ / maminetsi makumi maviri. Iyo inokodzera polysulfone uye polytetrafluoroethylene. Steam sterilization inogona kusvika 142 ℃, kumanikidza 0.2MPa, uye nguva yakakodzera ingangoita maminetsi makumi matatu. Kana iyo tembiricha yakanyanya kukwirira, iyo nguva yakanyanya kureba, uye iko kumanikidza kwakanyanya, iyo firita chinhu chingakuvadzwa.